युगसम्बाद साप्ताहिक - स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै
Sunday, 11.17.2019, 05:43am (GMT+5.5) Home Contact
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै
Thursday, 01.25.2018, 12:33pm (GMT+5.5)
अरुको नक्कल गरेर हावामा तर्बार चलाउनेहरुले आफ्नो अक्कल गुमाउँदा रहेछन् । दुहाई जनताको दिने, तर जनतालाई नै वेवास्ता गरेर आफ्नै मनोमानी चलाउने प्रवृत्ति नेताहरुमा देखेर जनताा आजित भएका छन् । जनताले त हिजो र आजको स्थिति दाँजिरहेका छन् । हिजोको फालेर ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले र नयाँ सरकारले के दियो त ? राजतन्त्र विस्थापित गरेकै पनि तेह्र वर्ष भैसके, तर दुर्गति थपिनु बाहेक केही भएन । गणतन्त्र ल्याएर स्वर्ग नै उतार्छौं भन्नेहरु मात्र रमाएर जनतालाई अलमल्याउनु बाहेक के भयो खै ? सामान्य जनताका लागि सोझै झुक्यान भएन ? आफ्नो देशको परिस्थिति, अवस्था र साधन–सुविधाको अवस्था विचारै नगरी बलजफ्त कुनै कुरा लाद्नुभन्दा जनताले पचाउनसक्ने काम गरेका भए आजको जस्तो भद्रगोलस्थिति त आउने थिएन ।
जनता कुनै ठोस काम भएको र आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन आएको देख्न र अनुभव गर्न चाहन्छन्, खोक्रा भाषण र रित्ता कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआउने कागजी योजनाका खोस्टा होइन । तर, नेताहरु स्वार्थका दाउपेचमा जनचाहनालाई निरन्तर वेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । कमजोर पक्षलाई उठाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा धेरैजसो शक्तिशालीकै पक्ष लिएको देखिन्छ । जनताका पक्षमा उभिनुपर्नेहरुले यहाँ उल्टो काम गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने अथवा बिरोध र अविश्वास हुने देखेमा जस्तासुकै जनबिरोधी काम गर्न पनि तयार हुने परम्परा नै बसालेका छन । आफ्नो पक्षमा नहुने देख्नेवित्तिकै संसद नै भंग गर्ने पनि देखिएकै हुन् । जनताको उपेक्षा गर्ने यो प्रवृत्ति बुझिनसक्नु भएको छ । जनता झुक्याउन अनेक शब्दजाल रच्छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवाद रे ? कि प्रजातान्त्रिक भन्नुप¥यो कि समाजवादी ? दुई डुंगामा एकएक खुट्टो राखेर नदी तरिन्छ ? समाजवाद भनेको त आजसम्मको अभ्यासमा पानीभित्र देखिने जून हो । सक्कली जून त आकाशमै हुन्छ । रुस र चीनले पार नलाग्ने देखेर बाटो फेरिसके, तर यहाँ पुरानो ढ्यांग्रो ठोकेर बसेका छन् । यो जनतालाई भ्रममा पारेर स्वार्थसिद्ध गर्ने काम मात्रै हो । अलिकति कागजी अधिकार थपिनु बाहेक । (त्यो पनि कार्यान्वयनकै समस्या) अरु के भयो त ?
केही दिनदेखि शितलहरको चर्चा छ तराईतिर भने जाजरकोटतिर भाइरल ज्वर प्रकोपको । छेपाराको उखान जस्तो अघिपछि पाहार तापेर गफ र भाषा छाँटेर बस्ने, मोजमस्तीगर्ने अनि जब शीतलहर या रोथव्याधी फैलिएर धेरै मान्छे मरिसकेपछि सरकार तातेजस्तो गर्ने र नेताहरु भाषण छाँट्न थाल्ने– यो के चाल हो कुन्नि ? न्यानो कपडा लगाउ, पोषिलो खाना खाउ, काममा ननिस्क, आगो तापेर घरै बस भनेर उपदेश दिने सरकारले गरीब जनतालाई पौष्टिक आहार खान पाउने, न्याना कपडा लगाउनसक्ने बनाउन आजसम्म के काम गरे ? उपदेश त जसले पनि दिनसक्छ, तर सरकारको दायित्व उपदेशले पूरा हुँदैन, कामै गरेर देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । के शीतलहरबाट जोगाउन हरेक वर्ष दाउरा र केही कम्बल बाँडेर मात्रै हुन्छ ? अभिलेख राख्नुप¥यो, शीतलहरबाट गरीब मात्रै किन मर्छन् ? वर्षैपिच्छे दाउरा मात्रै बाँड्ने कि गरीबीको स्तरबाट माथी उठाउने कार्ययोजना पनि लागू गर्ने ? तराईमा दशौं हजार झुप्राबीच दुई चारवटा सेता हवेली देखिन्छन्– जमीन्दार, मन्त्री, सांसद र बाबुसाहेबहरुका । तिनै हवेलीका शोषणमा परेका झुप्राबासीलाई उठाउने योजना कार्यक्रम लागू गर्नुप¥यो, नत्र आगो ताप, न्याना लुगा लगाउ भन्ने सरकारको उपदेश हाँस्यास्पद मात्र हुन्छ ।
त्यही दाउरा र न्याना कपडा बाँड्ने काम पनि शीतलहर र जाडो सिद्धिने बेलामा पुग्दा धेरैको ज्यान गैसकेको हुन्छ । त्यसमाथि वितरणमा पनि भेदभाव र पक्षपात हुन्छ । पाउनुपर्नेले नपाएर अरुले नै पाएको हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ । सरकारी पैसाबाट किनिने कम्बल खरीदमै दलाली र कमिशनका खेल हुन्छन् । सरकारी रकम हिनामिना र गरी ठगिने मात्रै काम हुन्छ । यस्ता टालटुले कामबाट गरीबको उद्धार हुँदैन, बरु उल्टै गरीबका नामबाट अरुले नै फाइदा उठाइरहेको हुन्छ । यसरी वर्षैंपिच्छे केही भारी दाउरा र दुईचार सय कम्बल बाँड्नुसट्टा गरीबी निवारण गर्ने कार्ययोजना पो चाहिएको छ । यहाँ गरीबी निवारण मन्त्रालय छ, मन्त्री छन्, गरीबी निवारण कोष छ, दाताले पनि पैसा दिएका छन् । तर, कसैले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेर झाराटार्ने काम मात्र भएको छ ।
चाहे भाइरल ज्वर होस् या झाडापखखाला, दर्जनौं मानिस मरेपछि मात्र सिंहदरबारले थाहा पाउँछ । प्रत्येकजसो गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकेन्द्र छन्, तर त्यहाँ कोही हुँदैन भन्छन् । रोग खुट्याउन काठमाडौंबाट डाक्टर र औषधि पुग्दा त्यहाँ हुन भैसकेको हुन्छ । हालै जाजरकोटको भाइरल ज्वरले त्यस्तै पा¥यो । तराई मात्रै होइन, चिसो मौसममा हिमाली भेगमा हिउँले पुरिएर कति कति जनधन चौपायाको क्षति हुन्छ । तिनको खोजी खबरी भएको पाइँदैन । सबै साधनसुविधा भएर पनि सम्बन्धित निकायबाट बेलैमा ध्यान पु¥याउन लगाउन नसक्नु सरकारकै बेवास्ता अथवा कमजोरी मान्नुपर्दछ । त्यसैले यस्ता कुरामा कुनबेला कुन निकायको आफ्नो काम तत्परतासाथ गर्नु गराउनुपर्ने हो ती निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन सक्नुप¥यो । आखिर सरकारको तत्परता देखिनुपर्ने यस्तै अप्ठयारो अवस्थामा हो ।
यहाँ विडम्बना के छ भने पालैपालो सत्तामा जो आए पनि बेकामे कागजी योजना, कमिशनका खेल, भ्रष्टाचार बाहेक केही भएन भन्ने आम गुनासो यथावत रह्यो । गरीबले नांगो जीउ ढाक्ने सार्थक उपाय अझैसम्म हुनसकेन । नाम गरीबको लिएर पैसा ल्याइन्छ, मोज धनीले गरिरहेका छन् । कागजी घोडा कुदाएको परिणाम ‘मरेपछि ओखति’ भनेजस्तो भैरहेको छ । चाहे वाग्मती सफाई भन्नोस् या चुरे संरक्षण योजना, पैसाको पैरो लागेको छ, तर उपलब्धि ? हातलाग्यो शून्य भनेजस्तो छ । अर्थात् सरकारको जुनसुकै कामले पनि फाइदा चाहिं हुनेखानेलाई नै भएको देखिन्छ । अश्लील ठानिन्छ भने क्षमा चाहन्छ् “जो अगुवा उही बाटोमा हगुवा” भनेझै सरकार नै अव्यवस्थाको कारक बन्छ भने अरुबाट अनुशासन खोजेर पाइँदैन । सरकार नै दलाल, कमिशनखोर र तस्करहरुका इशारामा नाच्छ भने के आशा गर्न सकिन्छ ।
राम्राराम्रा उब्जाउ खेतबारी हाउजिङलाई प्लटिङ गरेर बेन्च दिइएको छ । राजधानीमै प्राकृतिक रुपमा रहेका सुन्दर थुम्काथुम्की समेत खारेर दलालहरुले बालुवाको व्यापार गर्न थालेपछि शहर नै कुरुप बनाइसकेका छन् । फाइदा ठूलाबडालाई मात्रै भएको छ । गाउँघरका भीरपाखा पखेरा समेत पूर्वाधारविना नै सरकारले नगरपालिका बनाइदियो । जनताले पनि नगरबासी हुन पाइयो भन्ठाने । आज आएर ससाना कुरामा पनि नक्सापास, दस्तुर–कर वृद्धि हन थालेपछि बल्ल ‘सुकाइदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड’ भनेजस्तो भयो भन्न थालेका छन् । अर्थात् सरकारका विवेकहीन कामले आज फाइदा जति ठूलाबडालाई मात्रै र तल्लो तहका जनतालाई सास्ती मात्रै थपिएको छ । सरकारको यो के नीति हो कुन्नि, निम्नस्तरका जनता त उठ्नै नसक्ने भएका छन् । सधैं यस्तै टारटुरे अस्थायी व्यवस्थाले यो व्यवस्था कति दिन चल्ला ? नेताहरु पनि शीतलहरमा परेका हुन कि ?
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ ! (01.09.2018)